अनि हामी मास्क लाएर सुत्यौं... :: Setopati
कमलराज लम्साल जेठ २२
दिउँसो यसो हेर्दा गाउँपालिकाको बोर्डमा 'मैला, हुम्ला' लेखिएको देखेको थिएँ। हामीलाई 'मैला' मै सुत्नुपर्ने बाध्यता थियो। सुत्ने भनेको आरामका लागि हो। आराम शरीर र मन दुवैलाई चाहिन्छ। तर जसै सुत्न बल गर्‍यौं।
आराम हरायो। मनले निदाउनै मानेन। हामीलाई हिमाली यात्रामा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। गुनासो गर्नैपर्ने गरी कहीँ पनि सुतिएन। अवस्था अनुसारको व्यवस्था 'ठिकै' थियो। गर्नकै लागि गुनासो गरिएन पनि।
'भोलि बरू शिवजीको घरमा बास माग्नुपर्छ है' भनेर कुरा गर्दै थियौं। शिवजी अर्थात् तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुम्लाका सदस्य। स्थानीयहरू उनलाई क्षेत्रपाल भन्थे। रामा गाउँमा बिहे भोज खाएर फर्किँदै गर्दा बेलुकीपख उनले हामीलाई देखेका रहेछन्।
गाउँलेले हामीलाई 'पुलिस हौ कि' भनेका थिए।
रामाबाट छप्रेला फर्किँदा हामी तिनै शिवजीसँग कुरा गर्दै आएका थियौं। उनले 'बास बस्न अप्ठ्यारो भए मेरै घर आउनू' भनेका थिए। राति घर खोज्दै जाने आँट पनि आएन। त्यसपछि कतिबेला निदाइयो थाहै भएन।
फूल्टौराको घर ताँजाकोट ३ गाडापानी हो। पति काशीलाल नेपाली लुगा सिउने काम गर्छन्। फूल्टौरा उनकी दोस्रो श्रीमती हुन्। पहिलो श्रीमतीबाट दुई सन्तान छन्। कुल मिलाएर पाँच जना। तीन छोरा, दुई छोरी। हिजो राती जन्मने छोरी थिइन्। बच्चा जन्मेपछि धेरैबेर साल खसेन। उनलाई राति नै स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याइयो। त्यहाँ खासै 'राम्रो' उपचार हुन सकेन। स्वास्थ्यकर्मीकै सिफारिसमा उनलाई नेपालगञ्ज लगिएको थियो।
घरीघरी सोध्न जाँदा 'ब्लिडिङ बढी भयो' भन्थे। रक्तश्राव नरोकिएसम्म घाउ सिलाउने कुरा पनि भएन। बीस मिनेटमा सकिने शल्यक्रियालाई एक घन्टा लागेको थियो। म कर्णाली प्रदेश अस्पतालको अपरेसन थियटरबाहिर अधैर्य थिएँ, भित्र डाक्टर पनि आत्तिएका थिए रे।
उनीहरू भन्दै थिए– 'बच्चालाई संस्थाले लगेछ। राम्रै भयो। विचरा पुरुषले कसरी पाल्ला?'
पढ्नुस्ः भाग १- मनले बाम गाउँभन्दा अगाडि पाइला चाल्नै मानेन
भाग २- ट्रयाक्टरको छतमा बसेर हुम्लाको बाटो
भाग ३- रक्सी खानेलाई मात्र मासु!
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८, ०८:३७:००